~ ဏီလင်းညို ~: ယာယီခွင့်
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 9:51 PM
ဒီက ညီသေးသေးလေးလည်း မူးနောက်ပြီး အိပ်ပျက်စားပျက်ဖြစ်နေ၏.. ဘဝတူဒွေ........
ကျန်းမာရေးက အဓိကကျတာမို့ ဂရုစိုက်သာ နေပါတော့ ကိုဏီရေ...
နေကောင်းသွားတဲ့ အခါကျတော့ ပြန်ရေးပေါ့...
ဏီလင်းရေ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်နော်။ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပါတယ်။
မကြာခင် နေကောင်ကျန်းမာလာပါစေ ...။
ကိုဏီးရေ...... ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ.။ နေကောင်းရင် စာတွေပြန်ရေးပြီး ဘလော့တွေ ပြန်လည်လို့ ရတာပဲလေ..။
မောင်လေးဏီလင်းရေ...စိတ်မကောင်းဘူး အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့မောင်လေး တယောက် နေမကောင်းဘူးဆိုလို့၊ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးဆုံးပဲ...ဘလော့ဂ်လေးကို ခဏတော့ သံယောဇဉ် ဖြတ်ထားပါအုံးလေ...။ နေမြန်မြန် ပြန်ကောင်းပါစေ...မောင်လေးရေ...:(
ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ကိုဏီရယ်.။ နေမကောင်းဘူးဆိုတာ သိရတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ အမြန်ဆုံးနေကောင်းအောင်ကြိုးစားပေါ့။ နားနားနေနေ
အပန်းဖြေလိုက်ပါဗျာ။ ဂရုစိုက်ဗျာ။ မိဝေးဖဝေးနဲ့နေရတာ။ နေမြန်မြန်ကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဏီဏီရေ.... နေကောင်းအောင် ဂရုစိုက်ပါအူး..... အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့ တပတ်လောက် ဆက်တိုက် အ၀အိပ်ပြီးရင် တနှစ်လောက် အေးဆေး ဘလော့ဂင်းနိုင်တယ် သူငယ်ချင်း.... ဟဲဟဲ.. မယုံ မရှိနဲ့...... အလာဂါးနောက်တာ.... အာလောချံ ပရမန် လာဘံ.... ကျန်းမာခြင်းသည်... လက်နှစ်ချောင်း နဲ့ ကီးဘုတ်တလုံးလို့ အဆိုရှိတယ်လေ.... အဟဲ
အစ်ကိုရေ.. ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မျှော်နေပါ့မယ်။ အမြန်နေကောင်းပါစေ။
နေကောင်းအောင် အရင် ဂရုစိုက်လိုက်ပါဦး
ပြီးရင်တော့ အတိုးချပြီး ပြန်ရေးပေတော့ :D
အမြန်ဆုံး ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းပါစေး)
အရာအားလုံးထက် ကျန်းမာရေးက အရေးအကြီးဆုံးပါ...ဘလော့ဂ်ကို စိတ်ထဲကနေ ခဏထုတ်ထားလိုက်ပါဦး...
နေပြန်ကောင်းတဲ့အခါကျရင် အရင်လိုပဲ စာတွေကဗျာတွေဆက်လက်ရေးဖွဲ့နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကိုဏီလင်းညိုရေ... ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ခေါင်းမူးတဲ့ဝေဒနာက ကျွန်မလည်း မကြာခဏ ခံစားရတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ အမြန်ဆုံး ပြန်ကျန်းမာ ရွှင်လန်းလာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။
ဒီလောက်လည်နေတာတောင် ပို့စ်က တင်နိုင်သေးတယ် ဟုတ်လား ချစ်ကိုကြီး . . . . ဟိဟိ ဆက်လည်ပါ ဆက်လည်ပါ
ကိုဏီးကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါသည်။ အကျွန်ုပ်ပို့သသောမေတ္တာကိုရိုးရိုးကြီးခံယူပါလေ....
နေမြန်မြန်ကောင်းပြီး ကျန်းမာစွာဖြင့် ဘလော့ဂင်း နိုင်ပါစေ ..မသောက်ပဲတအားမူးနေတယ် ဆိုတော့ အကြောင်း ရှိ်မယ် ။ ဆရာဝန်ပြသေးလား ။ ပေတေ မနေနဲ့အုံး ။ အအိပ်အနေ အစားအသောက် အစစ ဂရုစိုက် နော် ..
ဏီလင်း ရေဆရာဝန်ပြဖို့ မပျင်းပါနဲ့။ အမြန်ဆုံးနေကောင်းပါစေလို့ နော်
ဒါဆိုအခြေအနေသိပ်မကောင်းဘူးထင်တယ်..။ ကျန်းမာရေးသာအဓိကကျတာမို့ ဂရုစိုက်ပါ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းရင်ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ အမြန်ဆုံးကျန်းမာလာပါစေနော်...။
အင်း ကိုဏီ လေး နေမကောင်းရင် ပူပင်နေတဲ့ သူတွေကို သနားစရာ မြန်မြန်လေး နေကောင်းလုပ်နော် ကျမ်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါဗျာ
အမြန်ဆုံး ပြန်ပြီး နေကောင်းကျန်းမာ လို့ အမြဲတမ်း ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ရှိ်ပါစေ ဗျာ။
ကေအယ်မှာတော့ ဘူတာကြီးနားမှာ တန်လင်းဆိုတဲ့အစိုးရဆေးရုံရှိရင် အလုပ်ပါမစ်ကတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြရင် ဆေးသက်သာတယ်နိုင်ငံသား တစ်ကျပ် နိုင်ငံခြားသား ၂၅ မဆိုးဖူး
မြန်မြန်နေကောင်းပါစေ. ဆေးလည်းမှန်မှန်သောက်ဦး။ နောက်ပြီး နေကောင်းတဲ့အခါ လာလည်ပေါ့ကို ဏီလင်းညို
မြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့ မေတ္တာပို့ လျက်
ဒီလိုပဲ ကျနော်တို့က လေလိုင်းကပဲ သတိပေး အားပေးရပါ။
မြန်မြန်ပြန်လည် ကျန်းမာ နေကောင်းပါစေ။
ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးဆုံးမို. ဂရုစိုက်ပါနော်။ အမြန်ဆုံးနေကောင်းပါစေလို. ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
နောင်းကေ အေနောင် နော်။
ကိုဏီ နေမကောင်းဖြစ်နေတာ မသိဘူး...အခုမှ (ကိုဏီပျောက်နေလို့ လာကြည့်ရင်း တွေ့တာ) သိရတာ...
ဂရုတစိုက်နဲ့ ကျန်းမာအောင် နေပါဗျာ
မကြာခင် ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ပြန်တွေ့ရမယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ။ အဆင်ပြေပါစေနော်
အဝေးမှာ နေနေရချိန်မှာ အာရောဂျံပရမံလာဘံ မှ ဖြစ်မှာ..။
ဂရုစိုက်ပါ။ အမြန်ဆုံးနေကောင်းပါစေနော် ။
ဒီကလည်း ကျန်းမာရေးက ယိုင်နဲ့နဲ့ ဘလော့ရေးပါတယ်ဆို။
သူကလည်း ရုတ်တရက်ချွတ်ယွင်းသွားရတယ်လို့း)) ဘလော့မလည်ဖြစ်တာကြာလို့ သိဘူးရယ်..
ဏီလင်းရေ မြန်မြန်နေကောင်းအောင် ကြိုးစားပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း ဆေးမှန်မှန်သောက်ပေါ့။